Dowlada oo kawar bixisay ciladii ku timid diyaaradii madaxweyne Xasan Sheekh Muqdisho ka qaaday iyo Qaabkii ay dib ugu soo laabteen	| Salaan Media
Dowlada oo kawar bixisay ciladii ku timid diyaaradii madaxweyne Xasan Sheekh Muqdisho ka qaaday iyo Qaabkii ay dib ugu soo laabteen
Afhayeenka Madaxtooyada ahna la taliyaha Madaxweynaha Somaliya Injineer C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) oo qadka taleefoonka ku qabtay shir jaraa’id ayaa ka warbixiyey xaaladooda caafimaad kadib ciladii ku timid diyaaradii ay lasocdeen wafdiga uu madaxweynuhu hogaaminayay.
Waxa uu sheegay Yariisoow in cilada diyaarada markii ay ku timid kadib ay kusoo noqdeen garoonka diyaaradaha Adan Cadde airport islamarkaana ay caafimaad qabaan dhamaan madaxweynaha iyo xubnihii la socday.
“Diyaaradu markii ay hawada gashay oo ay labaatan daqiiqo hawada ku jirtay ayaa duuliyaashii waxa ay noo sheegeen in diyaarada maashiinadeeda mid kamid ah uu ciladoobay kadibna ay demiyeen aysanna geli Karin safar dheer sidaaa darteed ay Muqdisho kusoo laabanayaan”, Yariisoow ayaa sidaa ku sheegay shirkiisa saxaafadeed.
Inkasta oo uu Yariisoow sheegay in labaatan daqiiqo kaliya ay hawada ku jireen ayaa hadana wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in diyaaradu ay ku dhawaatay xuduudka Kenya iyo Soomaaliya oo waqti dheer ay hawada ku jirtay kadibna ay soo caga dhigatay garoonka iyada oo dab ka baxayo laguna guuleestay in la demiyo.
Wararkii ugu danbeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynuh iyo wafdigiisa ay dhawaan ku duulayaan diyarada Haajara oo garoonka soo fariisatay si ay u qaado taas oo si toos ah uga dejin doonta garoonka diyaaradaha ee Magaalada Juba ee xarunta Koofurta Suudaan.